स्पष्टीकरणकर्ता भिडियो उत्पादन लागत कति गर्छ? | Martech Zone
स्पष्टीकरणकर्ता भिडियो उत्पादन लागत कति गर्छ?
शनिबार, सेप्टेम्बर 2, 2017 शनिबार, सेप्टेम्बर 2, 2017 Douglas Karr
My एजेन्सी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि धेरै केहि व्याख्याकर्ता भिडियो कार्यहरूलाई आउटसोर्स गरेको छ। हामीसँग छ केहि आश्चर्यजनक परिणामहरू पाए धेरै बर्षहरूमा जब उनीहरूलाई प्रयोग गर्दैछ, तर मूल्यहरू धेरै भिन्न छन्। जबकि एक स्प्यान्डर भिडियो एकदम सीधा अगाडि लाग्न सक्छ, त्यहाँ सँगै राख्न धेरै धेरै सार्ने भागहरू छन् प्रभावकारी व्याख्याकर्ता भिडियो:
लिपि - एक स्क्रिप्ट जसले समस्या पहिचान गर्दछ, समाधान प्रदान गर्दछ, ब्रान्डमा भिन्नता गर्दछ, र दर्शकलाई उनीहरू भिडियो हेर्न पछि कारबाही गर्न बाध्य पार्छ।
दृष्टान्त - पात्रहरू र दृश्यहरू ध्यानपूर्वक दर्शकसँग भावनात्मक रूपमा जडान गर्नको लागि डिजाइन गर्नुपर्दछ।
भ्वाइसओभर - एक पेशेवर भ्वाइसओभर यसको वजनको लागि सुनको हुन्छ, तपाईको स्क्रिप्टलाई जीवनमा ल्याउँदछ र तपाइँको दर्शकसँग मिल्छ।
आवाज - ध्वनी प्रभावहरू र पृष्ठभूमि संगीत जुन व्यावसायिक रूपमा अडियोसँग मिसिएको छ र निर्धक्कतासँग एनिमेसनमा मिलाउन आवश्यक छ।
एनिमेसन - एनिमेसन कि चिल्लो, संगठित, र समय सकियो राम्रोसँग दर्शन ल्याउनेछ।
एनिमेसन स्टुडियो बहुमत प्रति भिडियो मिनेट चार्ज देखि प्रयास आवश्यक आउटपुट संग मिल्दो छ। यसको मतलब यो होइन कि-मिनेटको भिडियो १ मिनेटको भिडियोको लागत २. times गुणा हुनेछ, त्यहाँ केहि बचतहरू छन् जुन तपाईं जानुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाइँको स्प्यान्डर लामो छ, अधिक तपाइँ नकारात्मक रूपमा तपाइँ तपाइँको व्याख्याकर्ता भिडियो को प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। एक उत्तम स्प्यान्डर भिडियो तल छान्नु पर्छ र मात्र सटीक स्पष्टीकरण गर्न कम्प्रेस गर्नु पर्छ जुन मात्र वर्णन गरिएको छ।
र जब यसको लागत आउँछ, आन्द्रे ओन्टोरोको रोटी परे निम्न सल्लाह प्रदान गर्दछ।
सस्तोमा छनौट गर्नु भनेको सँधै नराम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुको मतलब होइन, र प्रीमियम मूल्य तिर्नुमा पनि सन्तुष्टिको ग्यारेन्टी हुँदैन।
कसरी सही Explainer भिडियो उत्पादन कम्पनी छनौट गर्न
बजेट - फिल्टर जो तपाईंको बजेट भित्र चार्ज गर्ने कम्पनीहरू पाउन।
समीक्षा - तिनीहरूको पोर्टफोलियोमा हेर्नुहोस् र तपाईंलाई मनपर्नेहरू छान्नुहोस्।
सञ्चार गर्नुहोस् - तपाइँ तपाइँको स्प्यान्डर भिडियोको लागि के चाहानुहुन्छ भनेर विवरणहरू पठाउनुहोस्।
बोली - उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्।
अपेक्षा - स्पष्ट रूपमा तपाइँ के भुक्तानी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ के लिए एक उम्मीद सेट।
तपाईं जाँच गर्न चाहानुहुन्छ कि भनेर वा छैन तिनीहरू भविष्यका स्प्यान्डरहरू छुट पाउनेछन् किनकि ब्रान्डि and र इलस्ट्रेसन खर्चहरू पहिलो भिडियोमा समावेश गरिएको छ। तपाईं स्क्रिप्ट, दृष्टान्त, संगीत वा कुनै अन्य पक्ष प्रदान गर्न को लागी कुनै बचत छन् भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यो नबिर्सनुहोस् कि व्याख्याकर्ता भिडियो कम्पनीहरूले तपाईंलाई आउटपुट भिडियो मात्र प्रदान गर्दछ, कच्चा एनिमेसन होइन। यदि तपाईंलाई सम्पादन आवश्यक छ भने, तपाईं फर्कनु पर्छ र थप उद्धरण प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि, जब सम्म तपाईं केहि अनुभव प्राप्त गर्नुहुन्न, व्याख्याकर्ता भिडियो डिजाइनर भुक्तानको अंश हो - तिनीहरूलाई तपाईं भन्दा राम्रो हुन सक्छ!
एक स्पष्टीकरणकर्ताको लागत कति छ?
ब्रेडनब्यान्डबाट यस इन्फोग्राफिकमा, उत्तम अन्वेषक भिडियो प्रोडक्शन्स कम्पनी छनौट गर्न पूर्ण ईन्साइडर गाइड, कम्पनीले प्रक्रियाको बारेमा वर्णन गर्दछ र कसरी काम गर्ने उत्तम कम्पनी फेला पार्न विस्तृत चरणहरू। इन्फोग्राफिकको एक पक्ष प्रदान गरीएको छ, पनि, प्रति प्रमुख व्याख्याकर्ता भिडियो कम्पनीहरूको लागि लागत। दायरा पर्याप्त छ - explain १,००० र explain 1,000 प्रति व्याख्याकर्ता भिडियो बीच। हाम्रा ग्राहकहरूको परियोजनाहरू जुन हामीले आउटसोर्स गरेका थियौं $ १०,००० दायरामा -०-सेकेन्ड व्याख्याकर्ताका लागि।
यहाँ वर्णनकर्ता भिडियो उत्पादन कम्पनी मूल्य निर्धारण संग पूर्ण इन्फोग्राफिक छ Wizmtives, जिस्टियो, हाउन्ड स्टुडियो, रोटी परे, साधारण कहानी भिडियोहरू, फायर स्टार्टर भिडियोहरू, डेमोडक, एपिफियो, बुझाउनुहोस्, र आइड्राकेट। हामीले पनि उपयोग गरेका छौं यम यम भिडियोहरू जो Epipheo जस्तै को बारे मा मूल्य छन्।
टैग: रोटी परेलागतडेमोडकएपिफियोव्याख्याकर्ता भिडियोव्याख्याकर्ता भिडियो कम्पनीहरूव्याख्याकर्ता भिडियो लागतव्याख्याकर्ता भिडियो उत्पादन कम्पनीहरूबुझाउनुहोस्फायर स्टार्टर भिडियोहरूजिस्टियोहाउन्ड स्टुडियोकतिएक व्याख्याकर्ता भिडियो लागत कति गर्छकसरीआइड्राकेटमार्केटिंग भिडियोहरूसाधारण कहानी भिडियोहरूWizmotionयम यम भिडियोहरू
6 सजिलो चरणहरूमा सामाजिक मिडिया मार्केटिंग योजना
ओएसएक्समा ईमेल टेम्प्लेट सम्पादन सामग्री फोल्डिंगको साथ सजिलो छ
सेप्टेम्बर 3, 2017 बेलुका 10:03 बजे
विकासशील देशमा कम्पनीसँग जानु जुवा हो। सिम्पसन वा भेन्चर ब्रदर्स वा डिज्नी वा निकेलोडियन जस्ता च्यानलहरू जस्ता कार्यक्रमहरूमा काम गर्न विश्वास गर्नेहरूलाई पनि, राज्यहरूमा कलाकारहरूद्वारा निश्चित गरिएको उनीहरूको कामको राम्रो रकमको साथ समाप्त हुन्छ।
सेप्टेम्बर 4, 2017 मा 1: 26 AM
कुनै पनि विश्वव्यापी सेवाहरू जस्तै, त्यहाँ उत्कृष्ट र भयानक कम्पनीहरू जताततै छन्। हामीले इमानदारीपूर्वक कम्पनीको उत्पत्तिको सम्बन्धमा सम्बन्ध देखेका छैनौं। हामीले राज्यहरूमा राम्रो र नराम्रो भाग्य पनि पाएका छौं।